Gudoomiye Cali Gacal Casir oo ka hadlay xilka qaadista ay ku sameyeen Xildhibaanada Galmudug – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaGudoomiye Cali Gacal Casir oo ka hadlay xilka qaadista ay ku sameyeen Xildhibaanada Galmudug
Gudoomiye Cali Gacal Casir oo ka hadlay xilka qaadista ay ku sameyeen Xildhibaanada Galmudug
Hiiraan Xog, Oct 01, 2017:- Guddoomiyihii Baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay xil ka qaadis ay ku dhawaqeen Xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug, iyadoo xiisada siyaasadeed ee ka taagan Galmudug ay faraha ka sii baxeyso.
Cali Gacal Casir ayaa sheegay in qaab sharci aheyn loo maray xil ka qaadistaas, isagoo tilmaamay in dadka la isugu keenay ay ahaayeen shacab koofiyado loo geliyay.
“Sideedaba waxaa xilka la isaga qaadaa sharciyad, meesha waxaa la isugu soo uruuriyay dad shacab ah oo la dhahay xildhibaano ayaa yimid oo xilka ka qaaday, warkaas waa waxba kama jiraan waana ruwaayad”ayuu yiri Cali Gacal Casir.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Guddoomiye kuxigeenka 1aad Xareed Cali Xareed oo shir guddoominayay kulanka xilka looga qaaday uu ahaa nin xilkiisa mar hore laga qaaday, isla markaana uu yahay nin xildhibaan ah.
“Nin xilkiisa waayay ayuu ahaa, waana la yaabanay, ninka Guddoomiye kuxigeenka in horay xilkiisa laga qaaday ayuu ahaa, muddo afar bilood ayaa ka maqnaa kulanka”ayuu yiri Cali Gacal Casir.
Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa labo garab u kala jabay, waxaana ay qaadayaan tallaabooyin iska soo hor-jeeda oo xil ka qaadis ku sameynayaan masuliyiinta ugu sar sareeysa maamulkaas.